မှန်ကန်တဲ့ Domain Name ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ? -
Business တစ်ခုမှာ မှန်ကန်တဲ့ Domain name ရွေးချယ်တတ်ဖို့ဆိုတာလဲအရေးကြီးပါတယ်။ကဲဒါဆို မှန်ကန်တဲ့ Domain name တစ်ခုရဖို့ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ? သင့်ရဲ့ Web Identity အတွက်ဘယ်လို Key အချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်လဲ? စတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် Domain Hunter Gatherer အဖွဲ့ရဲ့ Key Tips တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Character အရေအတွက်နည်းလေ Typing ရိုက်ရတာလွယ်လေဖြစ်လို့ မိမိရဲ့ Domain Name ဟာ တိုတိုနဲ့ထိရောက်တဲ့ နာမည်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အကယ်၍မိမိရဲ့ Domain Name ဟာ စကားလုံးသုံးလုံးထက်ပိုနေရင်တော့ လူတွေအတွက်မှတ်မိဖို့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။
2. မိမိရဲ့ Domain Name ဟာလွယ်လွယ်ကူကူရေးလို့မှတ်လို့လွယ်တဲ့ နာမည်ဖြစ်ဖို့လဲအရေးကြီးပါတယ်။မှတ်မိလွယ်တဲ့ Domain name တစ်ခုဟာလဲ Online မှာမိမိရဲ့ Product or service တည်ရှိနေဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
3. အကယ်၍သင့်ရဲ့ Business ဟာဒေသတစ်ခုခုကိုအစွဲပြုထားရင်တော့ အဲ့နေရာဒေသအမည်ကို သင့်ရဲ့ Domainမှာထည့်သွင်းရေးသားသင့်ပါတယ်။ Local-Themed Domain တွေဟာလဲကိုယ့်ရဲ့ Brand အတွက်ထိရောက်တဲ့အကြံကောင်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။
4. နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Domain Name ဟာ Social Media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Instagram, Twitter မှာရှိတဲ့ Name တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိရပါမယ်။ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့ Brand ကိုလူသိများစေတဲ့အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
5. 90% အထက်ရှိတဲ့ User တွေဟာ .com site တွေကိုပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချကြပါတယ်။ မိမိ brand ရဲ့အရည်အသွေးလဲတက်စေပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ .com site တွေဟာပိုပီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပုံပေါ်လို့ပါ။
6. သင့်ရဲ့ Domain Name မှာပါတဲ့ Keyword တွေဟာလဲ SEO Ranking အတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Domain မှာပါရှိတဲ့ Keyword တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကိုရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုရရှိပြီးအလားအလာကောင်းစေပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Thursday October 18th, 2018/ Blog/0Comment